R/Wasaare Khayre”Ciyaaraha waa guul iyo horumar bulshadu ay ku socoto” | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA R/Wasaare Khayre”Ciyaaraha waa guul iyo horumar bulshadu ay ku socoto”
R/Wasaare Khayre”Ciyaaraha waa guul iyo horumar bulshadu ay ku socoto”
Muqdisho(SONNA) Iyadoo magaalada Muqdisho uu si rasmi ah uga bilowday tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee Dowlada Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir ayaa madaxda dowladda Soomaaliya waxaay ay arrintani kutilmaameen talaabooyin guul iyo horumar u ah shacabka Soomaaliyeed.
Ra’iisull Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo ka hadlayay habsami u socodka tartankan ciyaaraha Kubadda Cagta ayaa sheegay in ay yihiin ciyaaraha kuwo muujinaya horumarka iyo isdhexgalka bulshada.
Mudane XAsan Cali Khayre ayaa bogaadiayay ciyaaraha Soomaaliya,maadaama ay qeyb ka yihiin jaranjarooyinka lagu gaaro horumar amni iyo isdhexgal bulsho,waxaana hadalka uu jeediyay xili uu gelinkii dambe shalay uu ka qeybgalay tartankii ciyaaraha ee furitaanka oo dhexmaray kooxaha Jubbaland iyo Banaadir.
Boqolaal dadweyne ah oo ka kala yimid degmooyinka magaalada Muqdisho ayaa soo xaadirey garoonka waxaana dadka dareenkoodi ku jeheysanaa ciyaaraha socda iyo muhiimadda ay leeyihiin,taasi oo ku dareensiinaysa in bulshada ay u gudubtay dhinaca wanaaga in la isgudayda,lagana gudbo dhibaatada qabyaaladda iyo kalsooni darida.
Tartankan ciyaaraha oo ay soo qaban qaabisay Wasiirka dhalinyarada iyo Ciyaaraha Marwo Khadiijo Maxamed Diiriye iyo mas’uuliyiinta xiriirka kubadda Cagta ayaa wareegii koowaad isku arkay kooxaha Banaadir iyo Jubbaland,ciyaartaasi oo aad u kululaydd kana dhacday garoonka Banadir Studium ayaa waxaa 2-1 guusha ay ku raacday Banaadir.
Waxaa lafilayaa in maanta ay ciyaaraan kooxaha ka kala socoda K/Galbeed iyo Hirshabeele.
Previous articleQaramada midoobay oo ka digtay xaalado adag oo weli ka taagan Purma
Next articleDowladda Soomaaliya oo sheegtay in ganacsato ka socda Afrika ay maalgashi u imaan doonaan Soomaaliya